Ọnọdụ mberede: Japan machibidoro ndị niile na-ekiri ha egwuregwu 2020 Tokyo Olympics
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Japan » Ọnọdụ mberede: Japan machibidoro ndị niile na-ekiri ha egwuregwu 2020 Tokyo Olympics
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Egwuregwu • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Mịnịsta okwu egwuregwu Japan na Tamayo Marukawa
Agaghị ekwe ka ndị nkiri gaa asọmpi Tokyo nke Tokyo 2020 n'ihi oke nkọ nke ọrịa COVID-19 na Japan.
A gbahapụla atụmatụ ime ka ọnụ ọgụgụ pere mpe nke ndị nkiri bịara Egwuregwu Olympic Tokyo 2020.
Onye isi oche Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, rịọrọ mgbaghara maka ndị ji tiketi wee kọwaa ịchụpụ ìgwè mmadụ ọ bụla dịka "akwa ụta".
Tokyo kwuru na ọrịa COVID-19 kachasị elu kwa ụbọchị kemgbe etiti ọnwa Mee na Wenesde.
Mịnịsta okwu Olimpik na Japan Tamayo Marukawa kwupụtara na atụmatụ iji mee ka ọnụ ọgụgụ pere mpe nke ndị nkiri bịara Egwuregwu Olympic Tokyo 2020 Ahapụla naanị izu abụọ tupu ihe ahụ amalite.
A gaghị ekwe ka ndị na-egwu egwuregwu gaa asọmpi Olympic na-esote oke ọrịa COVID-19 na Japan.
Onye isi oche Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, rịọrọ mgbaghara maka ndị ji tiketi wee kọwaa mwepụ nke igwe mmadụ ọ bụla dịka "akwa ụta", na-eme ihe siri ike iji gbalịa izere ọhụụ ọhụrụ nke ọrịa na-efe efe n'etiti ịrị elu nke Delta dị iche iche na-efe efe.
Mịnịsta ala Yoshihide Suga kọwara mbugharị ahụ dị ka ihe dị mkpa, na-agbachitere nkwekọrịta ha mere na ngwụcha ọnwa gara aga nke gaara ahụ ikike iru ihe ruru pacenti iri ise, na-eburu ọtụtụ mmadụ 50 kwa ebe.
Echiche a gbadoro ụkwụ n’echiche na mgbasa nke COVID-19 ga-adị mfe site na ịchepụta ọgwụ mgbochi ogologo oge, naanị maka gọọmentị na kọmitii na-ahazi iji belata okpu ahụ na 5,000 na nzaghachi nke ịdọ aka ná ntị sitere n’aka ndị ọkachamara ahụike na ndị mmadụ pere mpe nọchiri anya ya nhọrọ ha kachasị nchebe.
Tokyo kwuru na ọrịa COVID-19 kachasị elu kwa ụbọchị kemgbe etiti Mee na Wenesde, na akụkọ banyere 920 ọrịa ọhụrụ na-eme ka ụjọ na-atụ ụjọ na ọbịbịa nke ọtụtụ puku ndị na-eme egwuregwu na ndị isi ga-eme ka ọnọdụ ahụ ka njọ tupu atụlee ndị Fans ọ bụla.
Onye isi oche Kọmitii Olimpik Mba Nile (IOC) bụ Thomas Bach duziri nzukọ na-emeghe na ndị nnọchi anya gọọmentị obodo na mba na ndị isi sitere na ngalaba anọ, kọmitii na-ahazi na Kọmitii Paralympic International.
Ọ sịrị, “Anyị egosipụtala ọrụ a kemgbe ụbọchị e yigharịrị ya. Anyị ga-egosipụtakwa ya taa.
"Anyị ga-akwado usoro ọ bụla dị mkpa iji nwee egwuregwu Olympic na Paralympic dị mma ma nwee ntụkwasị obi maka ndị Japan na ndị niile sonyere."
Egwuregwu ndị a ga-amalite na July 23 ruo August 8.